Isbadalweyn oo Nabad Galiyo oo Laga Dareemayo Degaanka Somalida – Rasaasa News
Dec 19, 2010 Isbadalweyn oo Nabad Galiyo oo Laga Dareemayo Degaanka Somalida, no more terrorist, peace in ethiopia, peace in ogaden
Jijiga – [Dec 19, 2010] wararka ka imanay gabalada dalka ayaa waxay xaqiijinayaan in dhamaan gabaladii awal hore ay dagaaladu ka socdeen ee degaanka Somalida ay aad u xasiloon yihiin oo ayna jirin wax dhibaato ah oo ka jirta. Waxaa awal hore dhibaato ahyd isu socodka gaadiidka ee gabalada dalka, waxaana bishiiba hal mar bixi jiray baabuur ciidan ah, oo loo yaqaan [kaambooy] oo raaca baabuurta wada quutu daruuriga iyo alaabooyinka ganacsiga ee ay wataan ganacsatadu ee u socda gabalada dalka.
Gaadiidka Kaambooyga ayaa ah gaadiid fara badan, oo bishiiba hal mar u baxa gabalka Ogaden, arintan oo jirtay tan iyo xiligii uu dalka xukumayey Boqor Xayle Salaase.
Hadaba, tan iyo intii ay nabada saxiixeen ururada ONLF iyo UWSLF, waxaa isbadal uu ku yimid isu socodkii baaruurta wada alaabooyinka uu raashinku ka midka yahay ee ay leeyihiin ganacsatadu.
Waxay wararku sheegayaan in baabuurta shacabka ah ee wada Alaabooyinku ay cabsi la,aan u baxaan gabalada iyo magaalooyinka dalka, marka laga reebo degmooyinka xiga xuduuda dalka Somaliya oo ah dal aanay dawladi ka jirin.
Degmooyin ka mid ah gabalka Gode iyo Wardher ayaa waxaa mar-marka qaarkood, dhac u gaysta qaar sheegta ururada nabad diidka, balse dadku waxay leeyihiin, marka aan si hoose u waraysano waxay noo sheegaan in ay yihiin Alshabaab.
Nabadgaliyada ayaa aad u sii xoogaysanaysa degaanka Somalida, marka laga reebo khaladaadyo ay wali samaynayaan ciidanka loo yaqaan New Police-ka, oo iyagu u baahan in ay bartaan shuruucda dalka ee ah difaca dalka iyo dadka.
Si kastaba ha ahaatee, waxaa uu isbadal wayn ku yimid dhaqdhaqaaqii gaadiidka wada raashinka iyo alaabooyinka ganacsiga, taas oo laga dareemayo magaalooyinka isbadal nololeed, waxaana hoos u dhacay ku xidhnaantii baabuurta Kaamboyga.